विचार/ विवेचना/ विविधः | लेकाली डट कम
जन्म जातै यस्तै परियो बांगो कुरा नजानेसी
भए भरको शब्द वान हानी सके मैले उसलाई
अनि बल्ल भन्छे उसले लाज छैन तिमीलाई
अरे म पनि के कम थिए भनि दिए छैन छैन
तिमीलाई जिस्क्याएको म मुर्खले हुदै होइन
मैले भने उनलाई होलि खेल्न आउछेउत
उसले भनि सिधाकुरा साचो प्रेम लाउछौत्!!!
This entry was posted on March 7, 2015, in विचार/ विवेचना/ विविधः.	Leaveacomment
गाउँको बास छ र बिजुलीको कुनै भरोसा छैन । त्यसैले एउटै काम दुई पटक गर्नु रहर नभएर वाध्यता हो । कहाँ बाट सुरु गरौँ त हाम्रो प्रेम कहाँनी ? :)
उ त्यहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो, त्यो फोटोबाट । फोटोमा हामी दुई हावामा उफ्री रहेकाछौं । मुनिको खाट नदेखिए पनि मलाई याद छ । उ थोते छे, म लाटी देखिन्छु । अहिले सम्म पनि आफ्ना सबै फोटाहरु त्यसतै नै लाग्छन । :) भित्तामा एउटा पोस्टर छ, एक “रक स्टार” बिद्युतिय गीतार बजाइरहेका छन । त्यो मामाको करामत थियो ।
त्यसपछि फिल्मी शैलिमा हिरो र गुण्डाको खोला ‘फाइट सिन’ हुन्थ्यो । हामी नयाँ प्लट रच्थ्यौँ । घर छाडी भाग्ने प्रेम जोडी । खोला म दौडिनुको आनन्द नै बेग्ल हुन्छ । पानीको बेगलाई चुनौती दिंदै दौडिनु पो रोमान्स! गरेका लाई सोध्नुस् न। अँ , म त त्यो भिन्न देखिने ढुङ्गाको बारे पो कुरा गरिरहेको थिँए, कहाँ बगिएछ ! :)
घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार जस्तो लाग्यो होला है ? के के न लेख्ली भनेको त फेरी रोमान्स! पुरै फेब्रुअरी ‘प्रेम्’ गन्थन गरेरै मार्न आँटी भनेर त सोच्दै हुनुहुन्न ? म “होइन” भन्न पनि सक्दिन! त्यसकै कुराले मान्छे मार्ने मेरो उदेस्य नभए पनि यो चाँही stream of unconsciousness लेखै पर्‍यो त्यसैले । जे बारे , जहिले , जे पनि कुरा हुन सक्छ । ढुङ्गा देखेँ त्यसको रोमान्टिक ईतिहास पो याद आयो।मेरो के दोश प्रभु !!! :)
प्रभु भन्दा याद आयो आज त शिव रात्री है । बुढीले फोन गरेकी थिइ, उसलाई शिव साह्रै रोमान्टिक भएकाले मन पर्छ रे ! “कसरी रोमान्टिक?” भनेर के सोधेको मात्र थिएँ , “स्वसथानी पढिनस?” उसले अर्को प्रश्न पो थपी । मैले कुरा मोडी हालेँ। जे होस् “ जय शम्भो!” है सबै जनलाई । दुबिधामा नपर्नोस् म भाङ, धतुरो र गाँजा पानमा मस्त छुइन । हाम्रो त्यो भाग्य कहाँ ? सधैं झैँ शिवप्रसाद बिहिन छ यो शिव रात्री । :( हा हा हा ( but hey not advocating for it ni, explaining because I don’t want to go through that Bloggers Adverstising or advocating for sth question again!! sometimes blogging isadepressing Job man.)
( Manyatimes home feels like psychos’ paradise! So that’s undoubtedly where my heart it :) )
This entry was posted on July 20, 2008, in विचार/ विवेचना/ विविधः.	Leaveacomment
खाडी मुलुक साउदी अरेविया र नेपाली कामदारहरु (चिज कुमार श्रेष्ठ)
This entry was posted on March 25, 2008, in विचार/ विवेचना/ विविधः.	Leaveacomment